"जीवन सफल हुन्छ"
जिन्दगी एक दिन मरेर जानुपर्छ, सवैकुरा छोडेर जानुपर्छ। त्यसैले रचनामार्फत जिन्दगीको बास्तविकता बुझाउन खोजेको छु। सफल जिन्दगी कसरी बनाउन भन्ने खोजेको छु। कामको व्यवस्ताले हामीहरुले परिवार, सम्बन्धहरुलाई...
Suvadin Media 1.3k 5
काश्मिरी बालबालिकाले काेरेका यी तस्बिरले मथाङ्गल ह...
कुनै तस्वीरमा आगोको झिल्का देखिन्छ त कुनैमा रगतको स्वरुप, कतै आकाश कालो छ त कतै धर्ती। तस्वीरहरुमा रातो (रगतको प्रतिक) रंग पछि कालो रंग (बिरोधको प्रतिक) को प्रयोग पनि प्रायः पाईन्छ। बालबालिका ले बनाएक...
Angad Singh 1.7k 0
काश्मिरी बालबालिकाले काेरेका यी तस्बिरले मथाङ्गल हल्लाइदिन्छ
जुन गीत भारतले प्रतिबन्ध लगाएको थियो
मूर्धन्य संगीतकार अम्मर तिनै संगीतकार हुन्। जसले संगीत भरेको ‘नौ लाख तारा उदाए..’ गीतका कारण दार्जिलिङका गोरखालीहरुमा चेतना मात्र भरेन भारतले एक समय उक्त गीतलाई प्रतिबन्धित समेत गरेको थियो।
Suvadin Desk 485 0
चुनाव विरोधी गतिविधि गरेकाे भन्दै प्रहरीद्वारा १०...
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १० जना कलाकारलाई प्रहरीले मङगलबार रोल्पाको इरिवाङबाट पक्राउ गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट जलजला सांस्कृतिक परिवारका सदस्य र...
Suvadin Media 658 0
चुनाव विरोधी गतिविधि गरेकाे भन्दै प्रहरीद्वारा १० कलाकार पक्राउ
थाहा पाउनुहाेस् शिल्पा शेट्टीबारे ९ राेचक तथ्य
चलचित्र क्षेत्रमा आइसकेपछि लामो समयसम्म अक्षय कुमारसंँग उनको प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। पछि बिछोड भइसकेपछि उनीहरु विवादमा परे। पछि उनको राज कुद्रासँग विवाह भयो। तर, अचम्मको कुरा श्रीमान र भुपू ब्वाइफ्...
Santosh Raj Panday 642 0
छिनभरमै तयार भएको गीत
म गीतहरु विधार्थीकालदेखि नै लेख्थे तर संग्रहित गर्न पाएको थिएन्। तर, आफ्ना रचनाहरुलाई जिवन्तता दिन दस्तावेजका रुपमा राख्न रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने चेत आईसकेपछि रेकर्ड गर्नका लागि म गीतहरु लेख्न थाले। सो...
Suvadin Media 1.1k 5
रिसको झोकमा लेखिएको गीत
मुलुकको राजनैतिक अस्थिरता र द्धन्द्धले युवाहरुको विदेश पलायन हुने क्रम तीब्र थियो। म पनि विदेश लागे। त्यहाँको माहौल गरे। काम गर्ने गति हेरे। राजनैतिक स्थिरता देखे। नेताहरुको नैतिकता र जवाफदेहिता साच्च...
Suvadin Media 616 0
रिलिज नहुँदै रणबीरको फिल्मले आमिरको रेकर्ड कसरी तो...
राजकुमार हिरानी हिजोआज रणबीर कपूरसँग संजय दत्तको बायोपिक बनाउँनमा व्यस्त छन्। यस फिल्मअघि राजकुमारले आमिर खानसँग ‘थ्री इडियट्स’ र ‘पिके’जस्ता सुपरहिट फिल्ममा काम गरिसकेका छन्, जुन फिल्मले निक्कै राम्र...
जो फिल्म नपाएपछि बने खलनायक
सुनील दत्त पर्दामा खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्न चाहान्थेनन्। तर, सुनीलले १९७१ देखि १९७५ सम्म कुनै फिल्म पाएनन्। र, उनको जीवनमा धक्का लाग्न थाल्यो। त्यसपछि अभिनेत्री साधना र आरके नय्यरले सुनीललाई ‘गीता...
र्‍यापरको बडि ल्याङ्ग्वइज र लुक्स पनि भिन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र्‍यापरले स्टाइलिङ, कपाल पाल्नु, मुन्द्रा लगाउनु, ट्याटु बनाउनु र ब्रासलेट लगाउनु अनिवार्यझै मानिन्छ। किनकी र्‍यापर नर्मल डान्सर भ...
Yam Bahadur Bam 5k 105
डिस्काेमा लाेकगीत घन्काउन बाध्य पारेकाे गीत
'लोकलय युवापिढीको मनमुटुमा बसाउँन फरक स्वाद दिने प्रयास गरेको थिए, मेरो लक्ष्य सफल रह्यो। गाउँमा मात्र घन्किने लोकगीतलाई ‘वारी जमुना पारी जमुना...’ शहरका गल्ली गल्लीमा घन्कियो, पार्टीमा घन्कियो, डिस्क...
Suvadin Media 596 0
मुलुक द्धन्द्धले ग्रस्रित भएकाले एकथरि युवाहरूमा नेपालमा बसेर केही हुदैंन। याे देशमा केही काम गर्ने बातावरण नै छैन भन्ने भावना पनि जागृत हुदै थियाे। त्यो माहौल देखेर उनमा कताकता युवाहरुमा देशप्रति नकर...
Suvadin Media 601 0
पहिलो चरणको द बिगेस्ट टेलिभिजन रियालिटी शो नृत्य र गायन प्रतिस्पर्धा पनि सदरमुकाम मार्तडीमै भएको आयोजकले जनाएको छ । यो छनौट प्रतियोगिता सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक गरिएको छ । यस पछि भने दोस्रो अडिशनबाट छ...
Dammar Giri 516 0
के गर्दैछिन् एन्जेलिना जोली?
ब्राड पिटरसँगकाे ११ वर्षे सम्बन्ध अाैपचारिक रूपमा ताेडेकी हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोली अहिले के गर्दै छन् हाेला? चासाकाे विषय हुन सक्छ। सन् २००५ मा जाेडिएकाे याे जाेडी सेक्टेम्बर २०१६ मा सम्बन्ध...
Santosh Raj Panday 497 0
मदन भोट जाने बेलामा मुनासँग भएकाे त्याे मर्मस्पर्श...
मुनामदन झ्याउरे लयमा आधारित कविता हो । हालसम्म नै नेपाली साहित्यमा सर्बाधिक रूचाइएकाे कृति मुनामदन हाे। मुनामदनलाई लिएर सन् १८५९ मा आफ्नो मृत्यु अघि महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटाले भनेका थिए, 'म मरेपछ...
मिस नेपाल वर्ल्ड २०१७ काे उपाधी निकिता चन्दकले जितेकी छिन्। उनलार्इ शुभदिन परिवारकाे तर्फबाट हार्दिक बधार्इ व्यक्त गर्दछाै ।
अफिसमा त्यति काम नभएपछि फर्सदिलो समयमा भेटघाट गर्न भन्दै उनका साथी गायक तथा संगीतकार अल्मोडा राना उप्रेती उनको अफिसमा आएका रहेछन्। ‘भुकम्पको ह्याङओभर पनि भर्खरै सकिएको थियो,’ बिधानले सम्झिए, बर्षा सिज...
किन पाउँदैनन् सलमान बेष्ट एक्टर अवार्ड?
फिल्म फेयर अवार्डले सलमानलाई लगभग किनारा लै लाइसक्यो। सलमान आइफाको बेष्ट अवार्डको दाैडबाट बाहिरिसके। सलमान ढुक्क छन् यो वर्षको वेष्ट एक्टर अवार्ड आफू पाउदैन भनेर।
Angad Singh 440 0
सांगीतिक बजारमा चर्चा कमाउदै पत्रकार एसबी (भिडिया...
दुई वर्ष अघि मात्र ‘हाँस्दा हाँस्दै रुनु पर्ने’ बोलको पहिलो गीत लिएर सांगीतिक क्षेत्रमा डेब्यू गरेका एसबीले फेरि अर्काे गीत बजारमा ल्याएका छन्।
सांगीतिक बजारमा चर्चा कमाउदै पत्रकार एसबी (भिडियाेसहित)
चीनमा ‘दंगल’ को नयाँ कीर्तिमान, कति कमायो?
कमाईको हिसाबले ‘बाहुबली–२’ लाई पनि पछि पार्न सफल भएको आमिर खान अभिनित फिल्म ‘दंगल’ ले चीनमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ।
Suvadin Desk 508 0
उनको संगीत क्षेत्रको सुरुवात आधुनिक गीतहरुबाट भएको थियो। त्यसो त उनी सबै प्रकारका गीत गाउने गायक पनि हुन् तर सदूरपश्चिमको स्थानिय भएरपनि आधुनिक गीतहरु मात्रै गाएको देखेपछि एकजना देउडा गायकले उनलाई आधु...
Suvadin Media 945 0
पोखरा गजल सङ्गमः लय मर्यो भने प्रलय हुन्छ
जरा फाउन्डेसन नेपाल र गजल सन्ध्या पोखराको संयुक्त आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘गजल सङ्गम’ मा देशका विभिन्न क्षेत्रका करिब २५ गजलगोले गजल वाचन गर्नुभएको थियो । दुई चरणमा विभक्त उक्त कार्यक्रमको पहिलो चरण ग...
Suvadin Media 837 0
मलाई रूख ढाल्न ६ घण्टा देउ र म पहिलो ४ घण्टा बन्चरो उदाउन लगाउनेछु।
Suvadin Desk 930 0
प्रायः गीतमा गायक/गायिकाको मात्रै बढी चर्चा हुने गर्छ। फ्रन्टमा उनीहरु देखिने भएकाले आम दर्शक/स्रोता प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुसँग अभ्यस्त हुनु स्वभाविक नै हो। तर, ‘न बिर्से तिमीलाई...’ गीतले गायिका अञ्जु...
Angad Singh 569 0
रेडियाे नेपालमा ‘रिजेक्ट’ भएकाे राइझुमा...
२०४५ साल कार्तिक महिनामा उनले पहिलोपटक रेडियो नेपालमा राइझुमा रेकर्ड गराए। रेडियो नेपालमा त्यहाँका कर्मचारी र कलाकारहरुले उनीजस्ता नवगायकहरुको परिक्षा लिन्थे। त्यहाँ स्वर टेष्ट हुन्थ्यो। गीत अनुसारको...
Suvadin Media 2.6k 3
‘बाहुबली–२’ लार्इ पछि पार्याे ‘दंगल’ ले
आमिरको फिल्म ‘दंगल’को विश्वव्यापी कमाई एक हजार सात ४३ करोड पुगेको छ भने ‘बाहुबली–२’ को कमाई एक हजार पाँच सय ३० करोड छ ।
Suvadin Desk 659 0
‘भिलेन’ पुस्करको रियल लाइफ यस्तो छ
बाक्लो दाह्रीजुँगा, घुम्रेको कपाल अनि ज्याङ्गो शरिर हेर्दै डर लाग्दो अनुहार। पर्दाका लागि फिट। ती हुन् चर्चित खलनायक हुन्, पुष्कर भट्ट। उनको नामै काफी छ दर्शकलाई चिनाउन। नेपाली मात्र होइन्, भारतीय...
Suvadin Desk 1.9k 10
वि.सं. १९०३ मा श्री ५ लाई बर्खात गरि श्री ३ को इतिहास सुरु गरेका उनी आफ्नो जीवन भर विभिन्न कारणले चर्चामा रहे । समय वित्दै जाँदा उनी एक किंबदन्ती जस्तै बन्न थाले । धरहराको टुप्पोबाट हाम फाल्थे रे, हात...
‘निर जैलै रिसाैनी...’
माईक्रोमा चढेका गाइनेहरुले सवैबाट केही न केही पैसा लैजान्थे तर बास्कोटाले तिनै गाइनेबाट गीतलाई कसरी लोकप्रिय बनाउँने भन्ने ज्ञान पाए। ‘उनीहरु विभिन्न भेगीय भाकाका सुमधूर गीत गाउन्थे, जुन स्थानियहरूमा...
ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डमा थपिए आठ विधा
‘ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’ मा आठ विधा थप गरिएको छ।नेपाली चलचित्रलाई अन्त र्राष्ट्रिय तहमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यसवर्षदेखि अाठ विधा थप गरेर २० विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने लागिएकाे हाे।